यिनै हुन् भीम रावललाई ज्या’न मा’र्ने ध’म्कि दिने व्यक्ति ! (प्रमाणसहित)
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले आफूलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने मान्छेबाट ज्या न मा र्ने ध म्की आएको बताएपछि नयाँ वहस सुरु भएको छ।
प्राय नेपाली राजनीतिमा कुनै न कुनै प्रकारका हल्ला र फण्डाहरु भइरहन्छ। हरेक महिनामा एक न एक चर्चाको विषय बन्छ।काण्डै काण्डको देश जस्तै बनेको छ। पछिल्लो समय एमसीसी, यति काण्ड नसेलाउँदै भीम रावल काण्ड बाहिएको छ।सगरमाथा टेलिभिजनको कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा जीवनराम भण्डारीसँग कुरा गर्दै रावलले एमसिसी सम्झौताको विरोध गर्दा र राष्ट्र हितको कुरा उठाउँदा बेलायती युवराज्ञी लेडी डायनाको जस्तो हालत हुने ध म्की आएको बताए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका रावलले सार्वजनिक रूपमा त्यो पनि बालुवाटारबाट ज्या न मा र्ने ध म्की आएको बताएपछि उनलाई कसले यस्तो ध म्की दियो त भन्ने कुरामा विभिन्न अडकलबाजी गरिएको छ।
रावलले भनेका छन् ‘मैले यो कुरा गर्दा तपाईंले अघि अलिकति छुनु भएको थियो। मलाई मेरो ज्या नको समेत ध म्की दिइएको छ। बालुवाटारमा बस्ने व्यक्तिबाट।
लेडी डायनाले जसरी ज्या न गुमाउनु पर्‍यो तिमीले पनि ज्या न गुमाउँला भनेर बालुवाटारसँग सम्बद्ध व्यक्तिबाट मलाई ध म्की दिइएको छ। यो बिडम्बना हो।
तर, त्यस्तो भन्ने व्यक्तिहरूले के कुरा पनि सम्झनुपर्छ भने पुष्पलालको मृ त्यु भएर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र देशभक्तिपूर्ण आवाजहरू हराएर गएनन् भन्ने कुरा स्मरण गर्नुपर्छ।
मदन भण्डारीलाई गाडी दुर्घ टनाको अनेक नाटक मञ्चन गरेर दासढुंगामा ह त्या गरेर मदन भण्डारीका देशभक्त पूर्ण आवाज नेपाली धर्तीबाट मेटिएका छैनन् भन्ने कुरा मलाई जीवनको ध म्की दिनेहरूले राम्ररी स्मरण गर्नुपर्छ।’
मंसिर र पुसमा गरी एक साता बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकका बेला रावल र थापाको विवादको श्रृंखला सुरू भएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय प्रवक्ता भन्नुपर्नेमा रावलले सार्वजनिक गरेको भन्दै थापाले आपत्ती जनाएका थिए।
‘राष्ट्रवाद’को बहसमा बुझेर नै उत्रिनुभएको हो तरु पार्टीले तपाईंका कविताबमोजिम चलिदिनुपर्ने कि कसो हो ? यी दुई कविताको ‘पुरानो’ र ‘नयाँ कवि’ तपाईं नै हो भन्ने विश्वास नलागेर नै सार्वजनिक खपतका लागि यहाँ दुबै कविता प्रस्तुतसम्म गरिएको जानकारी अनुरोध छ।
म पूरानो लिम्पियाधुरा लेख्ने कविको हिमायती हुँ। तर स्थायी कमिटीमा सुनाएर सार्वजनिक गरिएको कविता भने तथ्यको भ्रष्टीकरण, भ्रमको पुलिन्दा र आत्मनिन्दा एवं भत्सर्नाको मजाकपूर्ण दृष्टान्तबाहेक अरू केही होइन र हुन पनि सक्दैन।
तपाईंका यताका अन्तर्वार्ता, प्रस्तुति र यावत पक्षले क्रमशस् पापराजीको फन्दामा उहिले डायना परेजस्तोरवा आज तपाईं परिरहेको अनुभव भइरहेको छ।
यो नबुझेर वा नजानेर त पक्कै गर्नुभएको होइन होलारु एक्लो ‘बृहस्पति’ बन्न नखोज्नु नै हितकर हुन्छ होलारु
तपाइको आजको बोली, धारणा र अभिव्यक्ति नेकपाको संस्थागत निर्णय, धारणा र निर्देशन कदापि होइन र मान्न सकिँदैन।
कमसेकम आफूले टेकेको धर्ती र आफ्नो टाउकोले खामेको आकाशमात्रै थाम्न खोज्नु उचित होला कि। विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरता बिर्सेर फर्किने ठाउँ नै नराखी आफू अनुकूल अपव्याख्या गरेर बहकिनु उचित होइन। आगे कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्दि।
रावलको कुरा सुन्दा उनले यसैलाई ज्या न मा र्ने ध म्कीका रूपमा बुझेको देखिन्छ। आफूलाई ज्या न मा र्ने ध म्की आएकोबारे रावलले प्रहरीलाई भने कुनै खबर गरेका छैनन्। उहाँको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै उजुरी प्रहरीकोमा आएको छैन,’ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता डिएसपी होविन्द्र बोगटीले भने।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भने रावलको भनाइ मन्त्री हुन नपाएको आक्रोश भएको बताएका छन्। मैले उहाँले कविता लेखेको प्रसंगमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको हो। यही विषयलाई लिएर ज्यान मार्ने ध म्की आयो भन्नुभएछ। गृह र रक्षा मन्त्री भइसकेको व्यक्ति जसले कार्य
Previous सामाजिक सञ्जाल मा MCC को बिरो’ध हुदा डा. स्वर्णिम वाग्लेले खोले एमसीसीको नालीबेली..हेर्नुहोस् ।
Next ज्वाइँलाई छोरा बनाएर भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिइयो, वडाध्यक्षले एक लाख लिएको खुलासा
प्रचण्डको गृहजिल्लामा ओलीको पक्षमा विशाल जनलहर उत्रियो…हेर्नुहोस।
ओलिको राजिनामा मागे पछि जनता सडकमा “हामीलाई नेकपाको धेरै माया छ, नेताहरु मिल्नुहोस्”,,,,हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोस्।
5 days ago Daily News Nepal
अन्तत : ओली र प्रचण्डबीच पार्टी एकता बचाउने सहमति…हेर्नुहोस।
23 hours ago Daily News Nepal
ओली सरकार ढाल्न काठमाडौंका तीनवटा तारे होटलमा बसेर ‘रअ’ अधिकारीको चलखेल!